ခါးပိုက်နှိုက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ခါးပိုက်နှိုက်
Posted by MAUNG on Sep 11, 2013 in Short Story | 22 comments
မှတ်မှတ် ရရ၊ ကျွန်တော့ ဘွ မှာ ခါးပိုက်နှိုက် ဆိုသော အနှီ သကောင့် သားများ နဲ့ တေ့တေ့ ဆိုင်ဆိုင် နှစ်ခေါက် ကြီးများတောင် ဆုံဘူး တယ်ဗျ ။
ပထမ တစ်ခေါက်က၊ ကျွန်တော် ကျောင်းသွား ရက် တစ်ရက်မှာပေါ့ ……
အဲဒီ နေ့က ကျွန်တော်ကားမှတ်တိုင် ရောက်တော့၊ ကားစောင့် နေတဲ့ လူအုပ် ကြီးက မနည်း မနော ဗျာ။
ရုံးချိန်၊ ကျောင်းချိန် ဆိုတော့ ဗျာ ကားစောင့် နေတဲ့ လူတွေ မရှိဘူးဆို လူငါးဆယ်ထက်မ နည်းဘူးဗျ ။
ကား တစ်စီး ဆိုက်လိုက် စုပြုံတိုး တက်လိုက်နဲ့ မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက် ကြာတော့ ကျွန်တော့ အထင် လူတွေမနည်း လာဘဲ ပိုတောင် များများ လာတယ်။
ကဲ မဖြစ်ခြေ ဘူး။ ကားတိုးစီး တဲ့ ပညာ အကုန် ထုတ်မှ တော်ကာ ကြမယ်၊ နို့မို့ ဆိုကျောင်းနောက်ကျ တော့မှာဘဲ ဆိုပြီး လွယ်အိတ် ကိုစလွဲ သိုင်း၊ ရှိစု မဲ့စုပိုက်ဆံလေးနဲ့ ဝယ်ထား တဲ့ နေကာ မျက်မှန် လေးကိုချွတ် အိတ်ထောင့် ထဲ ထည့်၊ လုံခြည် တိုတို ပြင်ဝတ် ပြီး နောက် လာမဲ့ကား အတွက် ရယ်ဒီ လုပ်ထားတာ ပေါ့။
ဟော…. လာပါပြီ ဗျကား က၊ ဘယ်ရ မလဲ ဒါမျိုးဆိုပြီး၊ တိုးခွေ့ ရင်း ကားမ ထွက်ခင်လေး မှာကား ပေါ်ခြေခြခွင့်လေး ရသွားတယ် ။
အောင်မလေး ပျော်လိုက်တာ ဗျာ ၊ ကားပေါ်တော့ ရောက်ပြီ ဟလို့ တွေးမဆုံး …..
ဘေးက နေအတင်း တိုးနေတဲ့ လူ ကအသာ လေးနောက် ဆုတ်ပြီး ကားပေါ် ဆက်မတက်တော့ ဘူး။ နောက် က လူတွေက အတင်း ကားပေါ်တိုး၊ သူ ကနောက်ပြန် ဆုတ်နဲ့ ဟ ရှေ့တိုး ပါဟ၊ အိုး ဒီမှာ တက်နင်း မိနေပြီ ၊ဟယ် ဘယ်လို လူကြီး လဲ စသဖြင့် နောက်က တိုးနေ တဲ့ လူအုပ် က ဝိုင်းပြီး တစ်ယောက် တစ်ပေါက် ပြောနေ လို့ အဲဒီ လူကို သတိထားပြီး ကြည့်လိုက် တော့ မှ လား လား ကိုယ်တော်ချော က ကျွန်တော့ မျက်မှန်ကို သူ့ ဂျာကင် အတွင်း အိတ်ထဲ ထည့် ရင်း ကားပေါ်ဆက်မ တက်တော့တာ ဗျ။
ကျွန်တော် လဲ အောင်မငီး ငါ့ရှိစု မဲ့စုမျက်မှန် လေးတော့ ကုန်ပါပြီ ဟဆို ပြီး အတင်း ကားပေါ်ကပြန် ဆင်းတာပေါ့ ။
အိုး…ဘာပြော ကောင်းမလဲ ကားပေါ် အတင်းတိုး တက် နေတဲ့ လူအုပ် ကြီးလဲ ညီညီ ညာညာ သောင်းသောင်း ဖျဖျ ဝိုင်း မေတ္တာ ပို့တာပေါ့။
ကို ရွှေခါးပိုက် နှိုက်လဲ ကားပေါ်က အတင်းခွေ့ ပြန်ဆင်းလာတဲ့ ကျွန်တော့ ကို မျက်စိ ကြီး ပြူး ကြည့်နေတာ ပေါ့ ။
ကျွန်တော် ကြားဘူးတာ ခါးပိုက်နှိုက် တွေ က အုပ်စု ဖွဲ့ လုပ်စားတတ် တယ် ဆိုတော့ ကြောက်လို့ ဘေးဘီ ကို အကဲခပ်၊ အသိလေး ဘာလေးရှိ မလားလို့ ပြူးပြဲ ကြည့်တော့ လဲမတွေ့ ၊ချွေးပျံ လာတယ် ။
ခါးပိုက်နှိုက် လဲ ကြည့်ရတာ ကြံရာမရ ဖြစ်လာ ပုံရပြီး ကျွန်တော့ ကို လာညီလေး၊ ဟိုဘက် မှာစကား သွားပြောရအောင် လို့လာပြောတယ်။
ကျွန်တော် လဲ၊ အနား အကပ်မခံဘဲ ဟေ့လူ ကြီး ခင်ဗျား ကျွန်တော့ မျက်မှန် ပြန်ပေး ရင်ပေး၊ မပေးရင် အော်လိုက်မယ် ကျွန်တော့ နား မလာနဲ့ ဆိုတော့မျက်မှန် ကို အသာလေး လှမ်းပေး ပြီး ကားလမ်းဖြတ် ကူးပြီး သုတ်သုတ် နဲ့လစ်သွားတယ်၊ ပြီးတော့ လာနေတဲ့ လိုင်းကား ကို တားစီးပြီး လစ် သွား ရော။
ဗျာ………..ကျွန်တော် ဘာလို့ မအော်လဲဟုတ်လား ။ ကိုယ့်ရှေ့ မှာ ခါးပိုက်နှိုက် ကို သွေးထွက် သံယိုဖြစ်အောင် ဝိုင်း ဆွမ်းကြီးလောင်းတာ မျိုးမြင်ဘူး တယ်လေ ။ ကျွန်တော့ မျက်မှန်လဲ အကောင်း အတိုင်းပြန်ရနေမှတော့ သံသရာ မရှည်ချင်တော့ လို့ဗျ ။
နောက် တစ်ခေါက်က စမ်းချောင်း မဟာမြိုင် လမ်း ဘက်မှာ ။
ကျူရှင် ကပြန်လာတာ ။ နေ့ခင်း ဘက် နေပူ လွန်း လို့ နေမှာ လမ်းမှာ လူ နည်းနည်း ရှင်းနေတာ၊ ကျွန်တော့ ရှေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကနေ လူ တစ် ယောက်ကိုခါးပိုက်နှိုက် ခါး ပိုက်နှိုက် ဆိုပြီး လူ ဆယ်ယောက် လောက်ဝိုင်း လိုက် တော့ ကျွန်တော် လဲလန့် ဖြန့်ပြီး သေချာ ကြည့်တော့ သူ့လက်ထဲ မှာ ဓား ကြီး နဲ့ဗျ ။
ဒါနဲ့ ဘယ်ရ မလဲ၊ လမ်းဘေး ကတွေ့တဲ့ ခဲ နှစ်လုံး ကို လက်ဘယ်ညာ ကောက်ကိုင် ၊ ပြီးတော့……….
ပြီးတော့ ခါးပိုက်နှိုက် ပြေးလာတဲ့လမ်း ကြောင်း နဲ့လွတ်ရာ ဘက်လမ်းကူး ပြီးဘေးကပ်နေ တာပေါ့ဗျ၊ ဘယ်ရမလဲ ဟီး ဟီး။
ခါးပိုက်နှိုက်လဲ သူ့လမ်းသူ ဆက်ပြေး၊ လိုက်ဖမ်း တဲ့ လူတွေလဲ ဆက်လိုက် ….
အမ်မယ် လိုက်ဖမ်း တဲ့ လူတွေ ထဲက၊ ကျွန်တော်နဲ့ ရွယ်တူ လောက် တစ်ယောက် က အော် သွားသေး၊ ဘာတဲ့ ….မင်းကလဲ လက်ထဲ မှာ ခဲတွေ ရှိတာ ထု လိုက်တာမဟုတ် ဘူးတဲ့။
မောင် ဘဲဟာဘယ်ရမလဲ၊ ဟေ့ရောင် သယ်ရင်း မင်းဟာ မင်းသာ မိအောင် လိုက်ဖမ်းလို့ ။
ဟုတ်တယ် လေ၊ ဟိုက ဓားကြီး နဲ့ပြေးလာတာ၊ ရှေ့က နေ သွားပြီး ရှုပ် လို့မတော် ဗိုက် ဓားနဲ့ထိုး ရင်ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဗျ။
ခုလို ရွာထဲ မှာ ဟိုလျှောက်ရေး၊ ဒီလျှောက်ရေး တောင် မရေးနိုင် ဘူးဖြစ် သွားမယ် ။
ဟီး ဟီး ရှောင်ပေးလိုက် တာဘဲ ကောင်းပါတယ်၊ ဟုတ် ?
အဲဒါကတော့ ကျွန်တော် ကြုံဘူး တဲ့ခါးပိုက်နှိုက် အတွေ့ အကြုံပါ ။
ဒီရွာထဲက ရွာသူ ရွာသားတွေကော ခါးပိုက်နှိုက် ခံဘူးကြ လား။ ရှယ် ကြပါ ဦး ။
ပြန်မပေး ရင်ကျွန်တော်က တစ်ကယ်အော်တော့ မှာ ဟီး ဟီး
အရောင် တော့ နဲနဲ ဆင်တယ်
အဲ! တိတ်တိတ်လေးပဲ နေဖြစ်မှာ။
ဟီးဟီး တူတူ ဘဲ
အနော်လည်း ကြုံဖူးဒယ်…. ခါးပိုက်နှိုက်က မိသွားဒေါ့ အနော့်ဂို ဓါးမြှောင်ဂျီးနဲ့ လှမ်းထိုးဒယ်၊ အနော်လည်း ငါးမြွှေထိုးယိမ်းဂလေး ခါးနွဲ့ ရှောင်လိုက်ပီး ၄၅ဒီဂရီ လက်ဝါစောင်း ခုတ်ထည့်လိုက်ဒယ်။ ဒင်းဂလည်း မခေဘူးဗျ… တံတောင်နဲ့ ဖမ်းကာတယ်.. အနော်ဂ ဘယ်ရမလဲဆိုပြီး ခြေယောင်တချက်ပြပီး ဒူးပျံကျွေးလိုက်တာ အွတ်ခဲနဲပဲ ဒင်းမှောက်သွားရော… အဲဒီမှာဒင် သူ့လူနှစ်ယောက်က ဂျပန်ကင်ဒိုဓါးရှည်ဂျီး ကိုယ်စီနဲ့ ယားကနဲ့အော် ပြေးခုတ်ဝင်လာဒယ် အဲဒီမှာ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပီး ကီသွင်းပြီး လေထဲမှာ ခြေနှစ်ဖက် စုံကန်ထည့်လိုက်တာ နှစ်ကောင်စလုံး ဖလက်ပြသွားရော…။ ပြီးသေးဘူးဗျ.. ဘယ်အချိန်က စောင့်ကြည့်နေလဲ အသိဘူး.. ကားတစင်း ထိုးစိုက်လာပြီး အူဇီမောင်းပြန် စက်သေနတ်နဲ့ တရစပ် ပစ်ပါလေရာ…။ ဒီတခါတော့ အနော် မြေဂျီးပေါ် လျှပ်ထိုးလှဲချပြီး အဲဒီကားဆီကို လှိမ့်ချသွားရင်း အနားလည်းရောက်ရော ကားမှန်ကို ခြေပျံနဲ့ ကန်ထိုးခွဲလိုက်တာ စက်သေနတ်သမားရော ကားမောင်းသူပါ ခြေတကန်ထဲ နှစ်ကောင်စလုံး ထိတော့ဒါပဲဗျို့….။ အဲသာဗဲဗျာ သိပ်ပြောရင် ပိုရာကျမယ်…
ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလိုပါပဲလား ဦးညှောင်ရယ် :-)
အသိတစ်ယောက်ကတော့ သံပုရာသီးကိုအိတ်ထဲအမြဲထည့်ထားတယ်တဲ့.. ဘာဆိုင်လဲတော့သိဘူး ကားပေါ်မှာသတိမလွတ်အောင်ပြောတာပဲ..
အသိတစ်ယောက်ကတော့ သံပုရာသီးကိုအိတ်ထဲအမြဲထည့်ထားတယ်တဲ့.. ဘာဆိုင်လဲတော့သိဘူး ကားပေါ်မှာသတိမလွတ်အောင်ပြောတာပဲ.. သူတို့တွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီး ပြန်ရန်ပြုတတ်တယ်တော့ကြားဖူးတယ်.. ကိုယ့်အသက်ကအဖိုးအတန်ဆုံးမို့ တော်ရုံဆိုသာဓုသာခေါ်လိုက်ပါ
သာမီးဂလေးခရစ် ဦးကြောင်အကြောင်း စဉ်းစားနေရင်း နှစ်ခါထပ် မန်းမိသွားဒယ်နဲ့တူအိ.. ဒါမှမဟုတ် ပြိုင်ဖက် သဒို့သာမီး ကြေးမုံဂျီးအပေါ် နာလိုခံခက်ဖြစ် ဒေါကန်နေလို့များလား…။ အဲလို သဝံအတိုရဗူးနော်…. ဟောဒီဃ လျှာဂျီးတချောင်းဗဲရှိလို့ ရွေးရဒါ….။ လှယာဂျီးနဲ့ လှယျဂျီးနဲ့… တောက်စ်… ဖလားသခင်ဂလည်း ညံ့ဗ… လျှာနှစ်ချောင်း ဖန်ဆင်းပေးဒေါ့ ဘာဖြစ်မှာမို့လဲ… အခုဒေ့ါ တယောက်မဟုတ် တယောက်နဲ့ ဝေးရဒေါ့မယ်…။
ဟား ဦးကြောင်က ဒါမျိုးသိုင်း တွေ လဲရသကိုး
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေ မှာတုန်းက
အီကိုက ကျောင်းသားတယောက် စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်ကို လှမ်းအော်လိုက်လို့…
ဟိုက ဆင်း ပြေးရင်း စကေဘာနဲ့ ပြန်ထိုးလိုက်တာ ပွဲချင်းပြီးပဲ…
မကြေနပ်လို့ ကြံတောကို ကျောင်းသားတွေ တန်းစီပြီး အသုဘပို့တော့မှ…
မောင်မင်းကြီးသား ရဲနဲ့ ငထောက်များ ပေါ်တော်မူလာတော့တယ်…
တရားခံဖမ်းဘို့မဟုတ်၊ ကျောင်းသားတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့… စိတ်နာချက်
ကျွန်တော် တို့ခပ်ငယ်ငယ် ကတစ်ခေါက် ကြားဘူးလိုက်သေးတယ်
ခါးပိုက်နှိုက် ဓားနဲ့ ထိုးလို့ ကျောင်းသား တစ်ယောက်သေသွားတာ
နောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတွေဆူ မှာကြောက်ပြီး ခါးပိုက်နှိုက် အတွဲ လိုက်ကြီး ကြိုးပေးသတ် ဆိုပြီး သတင်းစာထဲ ပါဘူး တယ်။
အဲဒါ ဦးကျောက် ပြောတဲ့ ကေ့(စ်) လား မသိ ဘူး ?
ကျွန်တော် တို့ခပ်ငယ်ငယ်ဆိုတော့ ကျောက်စ် အားငယ်လာပြီ…
ကျုပ်လည်း ခီဏခီဏ ခါးပိုက်နှိုက် ခံရဒယ် …
နောက်ပိုင်းမှာ အထါနပ်လာဂဲ့ဒယ်ဂျ …
ဂုဆို ဘယ်တွားတွား ခါးပိုက်နှိုက်ခံရမှာစိုးညို့ ပိုက်ဆံ ဆောင်တွားဘူးးး
စပါယ်ယာ ကိုလည်း ခါးပိုက်နှိုက် ကျောက်ရို့ ပိုက်ဆံ ပါဘူးဆိုပီး ပေါစီးပလိုက်ဒါဘဲ …
သယ်ရင်းဒွေနဲ့ တွေ့လည်း ဂလိုဘဲ …
အပီအပြင် ကြိတ်ပလိုက်ပီး ခါးပိုက်နှိုက် ကျောက်ရို့ ပိုက်ဆံ ပါလာဘူးလို့ ပေါလိုက်ဒါဘဲ …
ကျုပ်တို့လည်း အားရင် တစ်နေ့လောက် အပြင်မှာ ထမင်းလေးဘာလေး အတူ စားရအောင်ဗျာ …
ကိုအံစာ ထမင်းကျွေးမလို့ တဲ့
ထမင်းတော့ ကျွေးမယ် တဲ့
ဒါပေမင့် ပိုက်ပိုက်က ခါးပိုက်နှိုက်သွားလို့
ကိုရင်ပဲ ရှင်းလိုက်ပါ ဒဲ့
ခါးကို ပိုက်ပြီး နှိုက်တာ ကိုတော့ မခံဘူးပါဘူးဗျာ
ခါးပိုက်နှိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ စထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတော့ စိတ်ထဲက စွဲနေတယ်
ငါသည်သာ ပန်းဖြစ်၍ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပွင့်ခွင့် ရခဲ့သော်
ိခါးပိုက်နှိုက်ခံရမှာ ပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်မှာ အားကြီးစိုးရိမ်တယ် ရှိမဲ့စု ပိုက်ဆံလေးတွေပြောင်မှာ
နောက်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မပုတင်ကိုအမြဲဆောင်ထားတတ်တော့ အဲဒိမပုတင်ကိုစိတ်အပူဆုံးပြန်လုပ်ရမှာမလွယ်လို့လေ
ခါးပိုက်နှိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ ကိုမောင် လို ပါပဲ ကြောက်တယ်တော့
ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းကြမှာလည်းမကြည့်ရက်ဘူး အဲလိုမျိုးတွေ မျက်စိရှေ့မကြုံရပါစေနဲ့ပဲဆုတောင်းပါတယ်